My World: "ဘီးလ်ဂျီးန် က ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ"
"ဘီးလ်ဂျီးန် က ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ"
Posted by PhyoPhyo at Sunday, June 26, 2011 Labels: ဘာသာပြန်သီချင်း, ဘီးလ်ဂျီးန် က ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ
ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့(မနေ့က) မိုက်ကယ်ဆုံးပါးသွားတာ ၂နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ မနေ့က သတင်းမကြည့်လိုက်ရတော့ မေ့နေတယ်။
မိုက်ကယ် ရေးထားတဲ့ Billie Jean သီချင်းအကြောင်း ပိုစ့်ကို မိုက်ကယ်အမှတ်တရ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ (အမှန်က စာအသစ်မရေးဖြစ်လို့ပါ)
Remember the time, Michael !!!
ပေ့ါပ်ဘုရင် လို့ နာမည်တွင်တဲ့ အမေရိကန်ဂီတသမား မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်(မိုက်ကယ်ဂျိုးဇက်ဂျက်ဆန်- သြဂုတ် ၂၉-၁၉၅၈ - ဇွန် ၂၅, ၂၀၀၉))ကတော့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ယေရှုခရစ်ရဲ့ အိမ်တော်မှာ ထာဝရ အနားယူသွားပါပြီ။ ဂျက်ဆန်ဟာ သူ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှန်သမျှ အောင်မြင်ခဲ့လို့ ဈေးကွက်ဝင်အောင်မြင်တဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နိုင်သူ တွေထဲက တစ်ယောက်လို့လဲ နာမည်ကြီးပြန်တယ်။ ၁၉၇၁ မှာ သူ့ရဲ တစ်ကိုယ်တော် ဂီတလမ်းကြောင်းကို စတင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ထဲက The Jackson5အဖွဲ့သားအဖြစ် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဂျက်ဆန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၊ ကျဆုံးမှုတွေ က အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ ကွာဟ လွန်းတယ်၊ ချီးမြှောက်မှုတွေ၊ ပြစ်တင်ရှုံ့ချမှုတွေကလဲ ဂျက်ဆန်ရဲ့ဘ၀မှာ ပြည့်သိပ်နေတာပါပဲ။ ဂျက်ဆန်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့
သီချင်းတွေထဲမှာ Thriller, Bad, Beat it, Heal the World, Black or White, I just can't stop loving you, We are the world, You are not alone, Remember the Time, I'll be there သီချင်းတွေက မြန်မာပရိသတ်တွေ နှစ်ခြိုက်သဘောကျ နားစွဲနေခဲ့တဲ့သီချင်းတွေပါ။ I'll be there ကတော့ Jackson5ရဲ့ အဖွဲ့သားအဖြစ် ဂျက်ဆန်ပါဝင်သီဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းဖြစ်ပြီး ပေါ့ပ် အဆိုတော် မာရေးယာကာရေး နဲ့ R&B အဆိုတော် ထရေးလောရန့်ဇ်တို့ လဲ ပြန်ဆိုထားကြတယ်။ ဂျက်ဆန် စန္ဒရားနဲ့သီဆိုထားတဲ့ I'll be there ဗီဒီယိုမှာ ဂျက်ဆန်က
စန္ဒရားတီးရင်း "I'll reach out my hand to you, I'll have faith in all you do" ဆိုပြီး သီချင်းကိုစထားတယ်။ ပြီးတော့ စန္ဒရားအတီးရပ်ကာ နောက်ကိုလှည့်အကြည့် ငယ်ငယ်က ဂျက်ဆန်ပုံရိပ်လေးက တံခါးဝမှာ ဘောင်ကိုမှီကာရပ်လိုက်တယ်။ ဂျက်ဆန်လေးက "Just call my name and I'll be there" လို့ ခပ်ချိုချို ကလေးသံလေးနဲ့ ဆိုလိုက်တယ်။ စန္ဒရားတီးနေတဲ့ ဂျက်ဆန်က အားပါးတရပြုံးရင်း စန္ဒရား ဆက်တီးတယ်။ ပြီးတော့ သံပြိုင်ဆိုပုံ ဂျက်ဆန်ရဲ့မောင်နှမတွေ၊ အဖေ အမေ ပုံရိပ်တွေထပ်တားတဲ့ I'll be there ဗီဒီယိုဟာ အခုချိန်မှာ ဂျက်ဆန်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခါရိုက်ခတ်စေခဲ့ပါပြီ။
ပေါ့ပ်ဘုရင်ဂျက်ဆန်က သီချင်းရေးဖို့လဲ စိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်။ ဂျက်ဆန် ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ Billie Jean သီချင်းဟာ လဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတယ်။ ဂျက်ဆန်က သူ့ရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ရေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ dance-pop R&B သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ပရိုဂျူဆာက ကွင်စီဂျုံးဖြစ်ပြီး ဂျုံးက ဒီသီချင်းကို အစက နဲနဲမှ သဘောမကျဘူးလို့ အမေးအဖြေတွေမှာ ပြောပြလေ့ရှိတယ်။ ဂျုံးက Billie Jean ဆိုတဲ့နာမည်အစား Not My Lover လို့ ပေးချင်တယ်၊ ဂျက်ဆန်က လဲ Billie Jean ဆိုတဲ့အမည်ကိုပဲပေးချင်တယ်။ "ဒီ Billie Jean ကြောင့်ဂျက်ဆန်နဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် အများကြီးပဲ အငြင်းပွားရတယ်၊ ကျွန်တော်က မကြိုက်ဘူး၊ သူက ကြိုက်တယ်၊
ကျွန်တော်က ဒီသီချင်းကိုဖြုတ်ပစ်ချင်တယ်၊ သူ ကထည့်ကိုထည့်ချင်နေတယ်၊ ဂျက်ဆန်ကပြောသေးတယ်၊ Billie Jean ဟာ ဂျယ်လီလိုပဲ၊ ခပ်ချိုချိုပေါ့၊ ကျွန်တော် ဒီသီချင်းဆိုလိုက်တိုင်း ကချင်လာတယ်...တဲ့ ... နောက်တော့ လဲ ... ဂျက်ဆန်မှန်ပါတယ်၊ Billie Jean ကို ဂျက်ဆန့်ပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်ကြိုက်ကြတယ်၊ "Billie Jean ဆိုတဲ့ ကလေးမ က ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးပေးတယ်၊ သီချင်းကိုပြောတာပါဗျာ" လို့ ဂျုံးက ပြောပြတယ်။ ၁၉၈၂က ထုတ်ဝေတဲ့ Thriller မှာ Billie Jean ကို ပရိုဂျူဆာ ဂျုံးက မထည့်စေချင်ခဲ့ဘူး၊ အသံဖမ်း အင်ဂျင်နီယာ ဘရုစ်ဆွီဒီယန် က နောက်ဆုံးအဆင့် အရည်အသွေးမရခင်အထိ ၉၁ ကြိမ်တိုင်အောင် အသံဖမ်းခဲ့ရတယ်။ ၁၉၈၃ ဇန်န၀ါရီ ၂ရက်နေ့မှာ စင်ဂဲလ် ဖြန့်လိုက်တယ်။ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှာအရောင်းရဆုံးစင်ဂဲလ် အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ယူကေရော ယူအက်စ်မှာပါ ထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ဆန်ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိရေးသားသူ ဂျေ ရန်ဒီ တာရာဘော်ရဲလ်လီ က Billie Jean သီချင်းဟာ ဂျက်ဆန် ၁၉၈၁ခုနှစ်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးထားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်လှတဲ့ ခပ်ငယ်ငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ အမွှာကလေး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ အဖေက ဂျက်ဆန်ပဲလို့ စွပ်စွဲလိုက်တော့တယ်၊ စာတွေအကြိမ်ကြိမ်ရေးပို့ခဲ့တယ်။ ဂျက်ဆန်က အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို လုံးဝမတွေ့ဘူးပါဘူးလို့ အတ္ထုပတ္တိစာအုပ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာတွေအကြိမ်ကြိမ်ပို့ပီးနောက်ပိုင်း ဂျက်ဆန် ပါဆယ်ထုတ် တစ်ခုရခဲ့တယ်၊ အဲဒီ အမျိုးသမီးပရိသတ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံရယ်၊ စာတစ်စောင်၊ သေနတ်တစ်လက်ရယ်ပါလာတာကြောင့်ဂျက်ဆန်ခမြာ အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေ တောင်ကြုံရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီစာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က သေနတ်က ဂျက်ဆန်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ဖြစ်ပြီး အဲဒီစာရတဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ့ ကလေးကိုပါ သတ်ပစ်လိုက်ပါပြီလို့ ရေးသားထားတာ ကြောင့် ဂျက်ဆန်ထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲ့ဒီ ဂျက်ဆန်ပရိသတ်အမျိုးသမီးငယ်ဟာ စိတ်ရောဂါဆေးရုံကို ပို့ထားရသူဖြစ်တာသိခဲ့ကြတယ်။
Motown 25 ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ Billie Jean သီချင်းသီဆိုရင်း ဂျက်ဆန်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ကလေးငယ်တွေပါ စိတ်ဝင်တစားဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယူအက်စ် Bound Brook High School ကျောင်းက Motown 25 မှာ ဂျက်ဆန်ဖျော်ဖြေရင်း ၀တ်ခဲ့သလို အဖြူရောင်လက်အိတ်တစ်ဘက်တည်း ၀တ်ဆင်တာကို တားမြစ်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Billie Jean ၂၀၀၈ ဟာ ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် ကိန်းဝက်စ်နဲ့ remix ပြန်ဆိုထားတဲ့သီချင်းပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပေမဲ့ မူရင်းသီချင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယဉ်လို့မရဘူးလို့ အပြစ်တင်ကြသူတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဂျက်ဆန်သီဆိုထားတဲ့ စာသားတွေကို အလွယ်တကူရှာနိုင်ပေမဲ့ ကိန်းဝက်စ် ရဲ့ စာသားတွေကိုတော့ အင်တာနက်မှာ ရှာလို့မရလောက်အောင် တားဖြစ်ပိတ်ပင်ထားတယ်။
ဂျက်ဆန်ရေးသားခဲ့တဲ့ Billie Jean ရဲ့အကြောင်းစပ်စုကြည့်မိတာလေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Billie Jean သီချင်းရဲ့ စီစဉ်ရေသားသူက မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆန်၊ ပရိုဂျူဆာက ကွင်စီဂျုံး၊ လိဒ်နဲ့ နောက်ခံအဆို မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆန်၊ ဒရမ်သမား လီယွန်နက်ဒူဂူချန်ဆလား၊ ဘေစ့်ဂစ်တာ လူးဝစ်ဂျွန်ဆန်၊ ဂစ်တာ ဒေးဗစ်ဝီလျံမ်စ်နဲ့ mix down က အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ ဘရုစ်ဆွီဒန်တို့ဖြစ်ကြတယ်။ မိုက်ကယ်ရဲ့ Billie Jean က ဘယ်လိုလဲ မြည်းစမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
သူမက ရုပ်ရှင်ထဲက အလှဘုရင်မ ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်နေသူပါ ...
စိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ် လို့ သူ့ကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုက်တယ် ... ဒါပေမဲ့ ကပွဲခန်းမရဲ့ ကြမ်းပြင်တ၀ိုက် လှည့်ပတ် ကခုန်မယ့်သူဟာ . ကိုယ်တယောက်ထဲပါလို့ ပြောတယ် .. ဘာကိုဆိုလိုချင်တာပါလိမ့် ...
သူမက ကပွဲခန်းမရဲ့ ကြမ်းပြင်တ၀ိုက် လှည့်ပတ် ကခုန်မယ့်သူဟာ .
ကိုယ်တယောက်ထဲပါလို့ တွင်တွင်ပြောနေလေရဲ့ ...
သူမ က ပြောပြန်တယ် သူမရဲ့ အမည်က ဘီးလ်ဂျီန်းပါ တဲ့ .. ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအယာမျိုးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာ တော့ အနားက ရှိရှိသမျှ ဦးခေါင်းတွေအားလုံး သူမဆီ ငဲ့စောင်းကုန်ကြတယ် ..
သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ ကပွဲကြမ်းပြင်က သူမနဲ့ အတူကခုန်မယ့် .. သူမရဲ့ အိပ်မက်ထဲကသူ ... သူ.. ဘယ်သူများ ဖြစ်လာမလဲ လို့ အလွန်အမင်း စပ်စုလိုဟန်တွေ အတိုင်းသားမြင်နေရပြီ ...
လူတွေက ကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေ ကို သတိထားဂရုစိုတ်ဖို့ တချိန်လုံး ပြောနေကြပြီ..
ပြီးတော့ ခပ်ရွယ်ရွယ်မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ အသဲနှလုံးတွေဆီ ရစ်သီဝဲလှည့်မနေဖို့လဲ တားကြပြန်ပြီ ...
ပြီးတော့လဲ မေမေက ကျွန်တော့်ကို အမြဲပြောတယ် မင်း ချစ်တဲ့သူ အဲဒီ မိန်းကလေးကို သတိထားဖို့ .. ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ သတိထားဖို့ ...သတိပေးစကားတွေညံစီလို့ ... လိမ်ညာဟန်ဆောင်မှုတွေက အမှန် တကယ်ကို ဖြစ်လာခဲ့ပြီ ...
ဘီးလ်ဂျီးန် က ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ..
ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲပါ လို့ တွင်တွင်ကြီးပြောနေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ...
ဒါပေမဲ့ ကလေး က ကျွန်တော့်ရဲ့သားမဟုတ်ပြန်ဘူး …
သူမက ပြောတယ် ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲပါတဲ့ ... ဒါပေမဲ့ ကလေးက ကျွန်တော့်သားမဟုတ်ပြန်ဘူး ..
ရက်ပေါင်း ၄၀ .. ညပေါင်း ၄၀ လုံးလုံး ...
တရားဥပဒေက သူမ ဘက်မှာ ရှိနေခဲ့တယ် .. ဒါပေမဲ့ ပွေလီရှုပ်ထွေးတဲ့ အကြံအစည်တွေ၊ တမင်ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ အစီအစဉ် တွေပြည့်နေတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ထဲ သူမတိုးဝင်နေတဲ့အခါ ဘယ်သူက ကျွန်တော့်အတွက် ရပ်တည်နိုင်သလဲ ...
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကပွဲခန်းမကြမ်းပြင်ပေါ်လှည့်ပတ် ကခုန်ခဲ့ကြတာကိုး ... ကျွန်တော့်ရဲ့လေးနက်တဲ့အကြံပြုချက်ကို လက်ခံပေးပါ အမြဲတမ်း နှစ်ကြိမ်ပြန်တွေးပါ .. အဲဒါလေး ပြန်သတိရပေးပါ .. နှစ်ကြိမ်လောက်တွေးပါ ...
သူမ က ပြောတယ် .. ငါတို့ ၃နာရီတိုင်အောင် ကခုန်ခဲ့ကြတယ် .. ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ခပ်စူးစူးကြည့်ရင်း ကလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံထုတ်ပြတယ် .. သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေအတိုင်းပဲ တဲ့ .. အို မဟုတ်လိုက်တာ ..
ကျွန်တော်တို့ကလဲ ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ် လှည့်ပတ်ကခုန်ခဲ့ကြတာကိုး ...
သူမက ခန်းမထဲဝင်လာခဲ့ပြီ .. ကျွန်တော့်ဘေးမှာ တွန့်လိန်တွန်လိန် ဟန်လုပ်ရင်းရပ်လိုက်တယ် .. မွှေးအီချိုမြလွန်းတဲ့ အနံ့က ရစ်ပတ်လို့ ... အဲ့ဒီနောက် အဖြစ်အပျက်တွေက ခပ်မြန်မြန် ခပ်သွက်သွက် ... သူမက သူမရဲ့အခန်းဆီ .. ခေါ်ဆောင်လို့ ...
ဒါပေမဲ့ ကလေး က ကျွန်တော့်ရဲ့သားမဟုတ်ပြန်ဘူး ...
ဘီးလ်ဂျီးန် က ...
ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ..
ဘီးလ်ဂျီးန် က ကျွန်တော့် အသဲလေး မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ .. ( သူမက တကယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ..)
To find out Michael's videos
Baby Billie Jean Dancing
Billie jean သီချင်းစာသားကို ဘာသာပြန်ဖတ်ရတာ မိုက်တယ်ဗျာ.. ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့this is it
သွားကြည့်ပြီး အိမ်ကသမီးလဲ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်
အက ကျင့်ရတာလဲ အမော။။
ယုန်မလေးမျက်နှာ .. ကိုယ်ပြန်တွေးမိတာ
I have talent, Ja imam talenat !
၆. မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အားလုံးစုံလင်စွာ (အပိုင်း ၁)...
၆. မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အားလုံးစုံလင်စွာ (အပိုင်း ၂)...